स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री विरोध खतिवडाले कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, जुम्लाका उपकुलपति डा मंगल रावललाई अदालतबाट फिर्ता भैसकेको मुद्दा देखाएर कामकाजमा रोक लगाएका छन् । २०७७ चैत २२ मा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले उपकुलपतिमा नियुक्त गरेको थियो । तर उपकुलपतिका लागि डा रावलको नियुक्ति प्रक्रिया गलत रहेको भन्दै प्रा. डा रामप्रसाद उप्रेतीले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । तर उनी आफैँले रिट फिर्ता लिन निवेदन दिएपछि २५ साउन २०७८ मा न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र मनोजकुमार शर्माको इजलासले रिट फिर्ताको अनुमति दिएको थियो । तर अहिले पुन सोही पत्रलाई देखाएर मन्त्री खतिवडाले ठाडो निर्देशनमा कामकाजमा रोक लगाएका हुन् ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले २२ चैतमा डा. रावललाई प्रतिष्ठानको उपकुलपतिमा नियुक्त गरेका थिए । अदालतको निर्णय पछि जानकारी भएकाले उपकुलपतिको नियुक्ति कानुनसम्मत रहेको भन्ने कर्मचारीको तर्क छ ।
मन्त्रालय स्रोतका अनुसार प्रतिष्ठानका उपकुलपतिलाई जिम्मेवारीबाट हटाउनका लागि ऐनमा व्यवस्था भएका कुनै पनि प्रक्रिया पुरा गरिएको छैन ।
प्रतिष्ठानको ऐनमा उपकुलपति, शिक्षाध्यक्ष वा रजिस्ट्रारले आफ्नो पदीय जिम्मेवारी पूरा नगरेको वा इमानदारीपूर्वक आफ्नो कर्तव्य पालना नगरेको भनेर सभाका एक चौथाइ सदस्यले लिखित निवेदन दिएमा छानविन समिति बनाउन सकिने व्यवस्था छ ।
त्यो समितिले सम्बन्धित व्यक्तिले पदीय जिम्मेवारी पूरा नगरेको, इमानदारीपूर्वक काम नगरेको सिफारिस गरेमा सभाको बैठकबाट पारित गर्नुपर्छ, अनि मात्र हटाउन सकिने व्यवस्था छ । तर स्वास्थ्य मन्त्रालय तथा मन्त्री खतिवडा यो प्रक्रियातिर प्रवेश गर्नै चाहेनन् ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयकै अधिकारीहरूकै असहमती
स्वास्थ्य मन्त्रालयका उच्च कर्मचारी स्रोतका अनुसार मन्त्रालयका नीतिगत तहका अधिकारीहरू नै मन्त्रीको निर्णयसँग असन्तुष्ट छन् । नियुक्त प्रक्रियामा अदालतमा दायर भएको रिट, निवेदकले नै फिर्ता गरिसकेको र, अदालतको आदेश आउनुपूर्व नै नियुक्त भएकाले मन्त्रीबाटै कमजोरी भएको बताउँछन् ।
कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई स्थापित गर्न र एमबीबीएस सञ्चालन गर्ने अवस्थामा पुर्याउन डा रावलको भूमिका राज्यले दिएको जिम्मेवारी भन्दा माथि भएकाले कामकाज रोकेर निमित्तलाई जिम्मेवारी दिनु राजनीतिक पूर्वाग्रह मात्रै भएको उनीहरूको ठहर छ ।
मन्त्रालय स्रोतका अनुसार डा मंगल रावलले शुक्रबार स्वास्थ्य मन्त्री खतिवडालाई भेटी कामकाज रोक्नुको कारण सोधेका थिए । तर स्वास्थ्य मन्त्री खडिवडाले भने कामकारवाहीका बिषयमा कुनै जवाफ दिएनन् ।स्वास्थ्य मन्त्रीले देखाएको अदालतको आदेश समेत डा रावलका हकमा कमजोर देखिएपछी तत्काल कुनै जवाफ नदिने मुडमा रहेको मन्त्रालय स्रोत बताउँछ ।
एमबिबिएस पढाईको अन्तिम तयारी प्रभावित
डा रावलकै नेतृत्वमा प्रतिष्ठानले एक सातामै एमबीबीएस कक्षा सञ्चालनको अन्तिम तयारीमा रहेकाे छ। डा रावल उपकुलपति बनेको २ महिनामानै कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले एमबीबीएस अध्यापनको अनुमति पाएको थियो ।
चिकित्सा शिक्षा आयोगले ३१ जेठमा कर्णालीलाई २० सिटमा एमबीबीएस अध्यापन अनुमति दिएको थियो । अहिले एमबीबीएस, बीएनएस, बी फार्मलगायतका अन्य शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालनको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ । चिकित्सा शिक्षा आयोगले लिएको परीक्षाका आधारमा विद्यार्थी भर्ना हुन थालिसकेका छन्  । प्रतिष्ठानले प्राध्यापकको व्यवस्था, पाठ्यक्रम निर्माण, ल्याब स्थापना, शिक्षक तथा विद्यार्थीका लागि आवास लगायतको व्यवस्था यसअघि नै गरिसकेको थियो ।
तर डा रावल र उनको सिफारिसमा नियुक्त भएका पदाधिकारीलाई काममा रोक लगाइएपछी भने एमबीबीएस पढाई अब कसरी अघि बढाउने भन्ने अन्योल सुरु भएको प्रतिष्ठानका कर्मचारी बताउँछन् । डा रावललाई कामकाजमा रोक लगाएको विरोधमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत स्वास्थ्य मन्त्रीलाई विरोध पत्र पठाएका कर्मचारीहरु स्वास्थ्य मन्त्रीको निर्णयले कर्णालीमा केहि दिनमै सूरु हन लागेको एमबीबीएस, बीएमएसलगायतका शैक्षिक कार्यक्रम अवरुद्ध हुने बताउँछन् । सबै व्यवस्थापन गरिरहेका रावल अहिले काठमाडौंमा छन् भने निमित्त उपकुलपतिकारुपमा डा.निरेश थापालाई तोकेको छ ।